အလုပ်မရှိပဲ ဝင်ငွေရရှိနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၇ ချက် | Buzzy
အလုပ်မရှိပဲ ဝင်ငွေရရှိနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၇ ချက်
အလုပ်မလုပ်ပဲ ဘယ်လိုဝင်ငွေရှာမလဲ ?
1. သင်ပိုင်ဆိုင်တာကို ရောင်းချပါ သို့တည်းမဟုတ် ငှားရမ်းပါ
သင့်အနေနဲ့ အလုပ်ကလည်းမရှိ ပိုက်ဆံကလည်း လို ဖြစ်နေရင်တော့ သင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အရာတွေထဲက တစ်ခုခုကို ရောင်းချပါ ၊ သို့မတည်းမဟုတ် ငှားရမ်းလို့ရနိုင်မယ့်ဟာမျိုးဆို ငှားပြီး ဝင်ငွေရှာနိုင်ပါတယ် ။
2. သင့်ရဲ. ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို အသုံးချပါ
လူတိုင်းမှာ ထူးဆန်းတဲ့ ဝါသနာ သို့တည်းမဟုတ် ဖန်တီးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ် ၊ သင့်မှာလည်း အစွမ်းအစ တစ်စုံတစ်ရာ ရှိပါလိမ့်မယ် ၊ ဒါကို အသုံးချပါ ၊ ပမာအားဖြင့် လက်မှုပညာတစ်ခုခု တက်ရင်လည်း တက်တာနဲ့ လုပ်ပါ ။ လုပ်ထားတဲ့ လက်မှုပစ္စည်းကို ရောင်းရဖို့ ကြိုးစားပါ ။ ကိုယ့်ရဲ.ဖန်တီးနိုင်စွမ်းဟာ အသုံးမဝင်လောက်ပါဘူးလို့ သဘောမထားပဲ ကြိုးစားကြည့်ပါ ။
3. အင်တာနက်မှာ အလုပ်များသူတွေအတွက် လုပ်ကိုင်ပေးပါ
အလုပ်များသူတွေဟာ အင်တာနက်ပေါ်ကနေ လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေ ကမ်းလှမ်းတဲ့ ဝက်ဆိုဒ်တွေ ရှိပါတယ် ၊ အဲ့ဒီဝက်ဆိုဒ်တွေကနေ သင်နဲ့ သင့်တော်တဲ့ အလုပ်ကို ရှာလုပ်ပါ။
4. အွန်လိုင်းဆာဗေးတွေ ဖြေပါ
အင်တာနက်မှာ ငွေပေးတဲ့ ဆာဗေးတွေ ရှိပါတယ် ၊ အဲ့ဒါတွေကို ဖြေပေးပြီး ဝင်ငွေ ရှာနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ချရတဲ့ ဆိုဒ်တွေတော့ ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ် ။ အကောင်းဆုံးကတော့ mysurvey.net မှာ လုပ်ကိုင်ပါ အခြားဆိုဒ်တွေလည်း အများအပြား ရှိပါတယ်။ review တွေ သေချာ ဖတ်ပြီးမှ လုပ်ပါ
5. အခြားလူတွေရဲ. ပျက်ဆီးနေတဲ့ အရာတွေကို ပြင်ပေးပါ
သင်ဟာ အနီးနားဝန်းကျင်က လူတွေနဲ့ ရင်းနှီးရင် သူတို့ဆီက ပျက်ဆီးနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပြုပြင်ပေးမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းပြီး ဝင်ငွေအနည်းငယ် ရှာနိုင်ပါတယ်။
သင်ဟာ အင်္ဂလိပ်စာ အထိုက်အလျှောက် ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ စာရေးခြင်းနဲ့ ဝင်ငွေရှာလို့ ရတဲ့ ဝက်ဆိုဒ်တွေ ရှိပါတယ် ၊ ပမာအားဖြင့် upwork,freelancer,fiverr,iwriter တို့လို ဆိုဒ်တွေမှာ ဝင်ငွေ ရှာနိုင်ပါတယ်။
သင်နဲ့ ခင်မင်ရင်နှီးတဲ့ မိဘတွေဆီမှာ သူတို့ကလေးငယ်ကို ကျူရှင်ပြပေးဖို့ ခွင့်တောင်းကြည့်ပါ ၊ ကျူရှင်သင်တာဟာလည်း အထိုက်အလျှောက် ဝင်ငွေကောင်းပါတယ်